Liverpool oo Malaayiin lacag ah khasaari doonta haddii Coutinho uu ku biiro Man United!! – Gool FM
(Yurub) 12 Maarso 2019. Wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa sheegaya in heshiis walba oo laacibka khadka dhexe ee Barcelona Philippe Coutinho ay kula wareegto Manchester United uu malaayiin lacag ah oo khasaaro ah u keeni doono kooxda Liverpool.
Coutinho ayaa ka tegay Liverpool sanadkii la soo dhaafay markii ay 142 milyan oo Giniga istarliinka ah (186 milyan oo dollar) ay kula wareegtay Barcelona, hase yeeshee mustaqbalkiisa Camp Nou ayaa shaki ku yimid kaddib markii soo bandhigi waayay qaab ciyaareedkii laga filayay.
Wargeyska ‘The Mirror’ ayaa qoraya in Manchester United oo ah koox ay aad u loollamaan Liverpool ay ku horreyso tartanka loogu jiro Coutinho, kaasoo haddii ay MU ku guuleysato ay kula wareegi karto 110 milyan oo Gini (144 milyan oo dollar), waxaana meesha ka baxaya markaasi qiimo lacageed oo abaalgudyo ahaa oo ay Liverpool kula heshiisay Barcelona.
Liverpool ayaa waxa ay ka qaadataa Barcelona 5.5 milyan oo dollar 25 kulan ciyaareed kasta oo uu Coutinho u ciyaaro kooxda Spanish-ka ah, waxaana ay khasaari kartaa 5.5 milyan oo dollar oo kale haddii 7 kulan oo Horyaalka La Liga ah uusan Coutinho u ciyaarin Barcelona xilli ciyaareedkan.
Waxaa kale oo iyana xisaabta ku jirta lacag 5.7 milyan oo dollar ah oo lagu heshiiyay in Barcelona bixiso haddii uu Coutinho kula guuleysto Champions League, lacagtaasna meesha ayay ka baxaysaa haddii Coutinho uu ka tago naadiga Catalunya.
Laakiin waxa ay Liverpool xoogaa hubtaa in ay heli doonto 5.7 milyan oo dollar oo ay xaq u lahayd haddii Barcelona u soo gudbubto koobka Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda, hase ahaatee waxaa isu geyn Liverpool ay khasaari doontaa haddii uu Coutinho Barcelona ka dhaqaaqo 22.4 milyan oo dollarka Mareykanka ah.
Heegan Oo Galabta Guul Ka Gaartay kooxda Jeenyo